Bakhaarka elektaroniga wuxuu bixiyaa ilaa afar bilood nambarro bilaash ah oo loogu talagalay Apple Music | Waxaan ka socdaa mac
Waa macquul in in ka badan mid ka mid ah dadkii goobta joogay ay durba is weydaarsadeen wax yar ka hor laakiin in la caddeeyo inaysan ku sii nagaanin sida ay halkan ka sheegaan. Xaaladdan oo kale dukaanka elektiroonigga iyo aaladaha caanka ah ee loo yaqaan 'MediaMarkt' waxay bixisaa lambar Apple Music ah oo xayeysiis ah isticmaaleyaasha cusubi waxay heli karaan adeegga ilaa afar bilood oo bilaash ah.
Uma baahnid inaad wax ka iibsato dukaanka, wax yar baa ka fudud a dallacsiin in muddo ah shaqeyneysay iyo in dhowr bilood ka dib qaar ka mid ah dadka isticmaala ay noo sheegeen in mar kale la heli karo, sidaas darteed waxaan dooneynaa inaan kula wadaagno si aad ugu raaxeysato.
Tan darteed waa wax fudud sida ka hel xayeysiinta xiriiriyehan oo ku raaxee bilaha bilaashka ah ee adeegga. Waxaa laga yaabaa haddii aad horey u isticmaashay koodhka inay kuu sheegi doonto inaysan macquul ahayn inaad laba jeer soo furto ama xitaa aysan kuu shaqeyn karin laakiin inaad isku daydo. Xaaladaha badankood annaga waxay ku dari doontaa bil bilaash Apple Music.
Haddii aad horey u laheyd dalacsiin ama aad furatay lambar kale horaantii bishaan, waxaa si toos ah loogu dari doonaa waqtiga aad horey u laheyd, marka waa isugeyn. Xusuusnow in adeegan Apple Music uu leeyahay bil kasta qiimahiisu yahay 9,99 euro oo waxaad heli doontaa dhammaan muusikadaada ama muusikada aad ugu jeceshahay dhammaan aaladahaaga markasta iyo meel kasta oo aad rabto. Apple Music hadda waa la heli karaa in ka badan 70 milyan oo heeso xayeysiis ma jiro si aad ugu raaxeysato muusikada ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaanka elektaroniga wuxuu bixiyaa illaa afar bilood nambarro bilaash ah oo loogu talagalay Apple Music